Porn မကုန်မှီငါတို့ကိုခွဲနေသလား။ ကွာရှင်းခြင်းအပေါ်အပြာစာပေအသုံးပြုမှု၏ longitudinal Effects, (2016) - Porn On Your Brain
Link - ကွာရှင်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေများပြားလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း
SEATTLE - အစသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုလက်ထပ်သောအမေရိကန်များအတွက်ကွာရှင်းရန်ဖြစ်နိုင်ချေသိသိသာသာတိုးလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ၎င်းတိုးမြှင့်ခြင်းသည်အမျိုးသမီးများအတွက်ကြီးမားသည်၊ အမေရိကန်လူမှုဗေဒအသင်း၏ ၁၁၁ ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး (ASA) တွင်တင်ပြမည့်လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရသည်။ ။
“ စစ်တမ်းလှိုင်းတံပိုးများအကြားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစတင်အသုံးပြုခြင်းသည်နောက်စစ်တမ်းကာလတစ်ခုတွင် ၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိကွာရှင်းခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုနှစ်ဆနီးပါးရှိစေပြီး၊ အမျိုးသမီးများအတွက် ၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိသုံးဆနီးပါးတိုးလာသည်” ဟုရေးသားသူ ဦး ဆောင်သူဆမ်မြူရယ်ပယ်ရီကပြောကြားခဲ့သည်။ လေ့လာမှုနှင့်ဥက္ကလာဟိုးမားတက္ကသိုလ်မှလူမှုဗေဒ၏လက်ထောက်ပါမောက္ခဖြစ်သည်။ လူမှုရေးအခြေအနေအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းသည်အိမ်ထောင်ရေးတည်ငြိမ်မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကဖော်ပြသည်။
ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော“ ငါတို့မဆုံမှီငါတို့အဖို့သီးခြားစီလုပ်နေသလား။ ကွာရှင်းခြင်းအပေါ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု၏ longitudinal Effects” လေ့လာမှုသည်အမေရိကန်လူမျိုးထောင်ပေါင်းများစွာမှကောက်ယူသည့်တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားပြုအထွေထွေလူမှုရေးစစ်တမ်း၏အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ၂၀၀၆-၂၀၁၀၊ ၂၀၀၈-၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၀-၂၀၁၄ မှနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ဖြေဆိုသူများကိုသူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေများအကြောင်းသုံးကြိမ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ လေ့လာမှုသည်ကန ဦး လက်ထပ်ထိမ်းမြားခံသူများ၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်စစ်တမ်းလှိုင်းများကြားရှိအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေကိုအဓိကထားသောစာရင်းအင်းပုံစံကိုအသုံးပြုသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားအစီရင်ခံခြင်းမရှိသောကန ဦး လှိုင်းလုံးကြီးဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သော်လည်းနောက်ဆက်တွဲလှိုင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သောဖြေကြားသူများသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုစတင်ခဲ့သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ထို့နောက်လေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်းအသုံးပြုမှု၌ဤပြောင်းလဲမှုနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမပြုခဲ့သောသူများအကြားကွာရှင်းခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ နောက်ဆက်တွဲစစ်တမ်းလှိုင်းအားဖြင့်ကွာရှင်းပြတ်စဲခံသူများ၏ဖြစ်နိုင်ချေကိုဆက်စပ်ထားသည်။
ပြောင်းလဲနေတဲ့ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုမှုအလေ့အထများနှင့်အထွေထွေ, ပယ်ရီနှင့်သူ၏တွဲဖက်ရေးသားသူကုရု Schleifer, ဥက္ကလာဟိုးမားတက္ကသိုလ်မှလူမှုဗေဒ၏လက်ထောက်ပါမောက္ခအတွက်ကွာရှင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကြားအသင်းအဖွဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးအပြင်, ထို့အပြင်အသက်, ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်အိမ်ထောင်ရေးပျော်ရွှင်မှုကိုတည်းဖြတ်ပုံကိုလေ့လာ ပြောင်းလဲနေတဲ့ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုမှုအလေ့အထများနှင့်အိမ်ထောင်ရေးတည်ငြိမ်မှုကြားက link ကို။
ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့စတင်လက်ထပ်အမေရိကန်များ၏နမူနာများအတွက်ကွာရှင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုတိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်နေစဉ်, စီးပွါးအငယ်လူကြီးများအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့လေ့လာမှုသူသို့မဟုတ်သူမညစ်ညမ်း, လာမယ့်စစ်တမ်းလှိုင်းများကကွာရှင်းတဲ့များ၏မြင့်မားတဲ့သူသို့မဟုတ်သူမ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကြည့်စတင်ခဲ့သည့်အခါငယ်တစ်ခုအရွယ်ရောက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
"အမေရိကန်လူငယ်များသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကိုအဟောင်းအမေရိကန်များထက်များသောအားဖြင့်ရှုမြင်လေ့ရှိကြပြီးအဟောင်းများကိုအမေရိကန်များသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုရင့်ကျက်သော၊ ငွေကြေးအရထူထပ်သောကြောင့်အိမ်ထောင်ရေးတွင်ပိုမိုတည်ငြိမ်သောလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကိုခံကြရသည်။ ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းကကွာရှင်းမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုသည်အသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှပိုမိုအားနည်းလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့တယ်။
အစညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလည်းဘာသာရေးဝန်ဆောင်မှုတက်ရောက်သူဖြင့်တိုင်းတာခဲ့သောလျော့နည်းဘာသာရေးဖြစ်နှင့်သောသူတို့၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားအပေါ်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအနှုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သညျ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုစတင်, အပတ်တိုင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဘာသာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုတက်ရောက်ရန်မပြုခဲ့သောသူတို့အဘို့ကိုနောက်စစ်တမ်းများကကွာရှင်းတဲ့များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်6ရာခိုင်နှုန်း 12 ရာခိုင်နှုန်းကနေတိုးနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရန်စတင်အပေါ်သို့ကွာရှင်းသူတို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်အနည်းဆုံးအပတ်စဉ်လွှမှာဘာသာရေးန်ဆောင်မှုများတက်ရောက်ခဲ့ပြီးသောသူတို့အားနီးပါးမျှတိုး။ ပယ်ရီ၏အဆိုအရပိုပြီးဘာသာရေးဖြစ်ခြင်းအိမ်ထောင်ရေးတည်ငြိမ်မှုအပေါ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏အနုတ်လက္ခဏာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျှော့ချနိုင်ရန်သလိုပဲဆိုတဲ့အချက်ကိုတချို့ယခင်သုတေသနကနေ deviates ။
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးတို့အကြားမကောင်းသောဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သောယခင်လေ့လာမှုများကချာ့ချ်တက်သူများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုပိုများသည်ဟုပြသခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များပိုမိုများပြားလာသောကြောင့်ယင်းသည်ထိုသို့ယူဆခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များအရဘာသာရေးသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသည့်တိုင်အောင်ပင်အိမ်ထောင်ရေးကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဘာသာရေးအုပ်စုများသည်ကွာရှင်းမှုကိုပုံဖော်။ အိမ်ထောင်ရေးတည်ငြိမ်မှုကို ဦး စားပေးသောကြောင့်ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသောအမေရိကန်များရှိလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုသည်အသိုင်းအဝိုင်း၏ဖိအားနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအပေါ်ဖိအားပေးမှုများနှင့်အိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးအပေါ် မူတည်၍ ဖြစ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်သုတေသီများကဖြေဆိုသူများ၏ကန ဦး တင်ပြသောအိမ်ထောင်ရေးပျော်ရွှင်မှုအဆင့်သည်အပြာစာပေရုပ်ပုံနှင့်ကွာရှင်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် ပထမစစ်တမ်းလှိုင်းတွင်လက်ထပ်ခြင်းကို“ အလွန်ပျော်ရွှင်” ကြောင်းအစီရင်ခံသူများအနက်လာမည့်စစ်တမ်းမတိုင်မီညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကိုစတင်ခြင်းသည် ၃ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိကွာခြားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးအချိန်ကာလအားဖြင့်ကွာရှင်းခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ နောက်လာမည့်စစ်တမ်း။
သို့သော်အစ၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကအိမ်ထောင်ရေးပျော်ရွှင်မှုကိုအစပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သူများအတွက်စာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောဆက်နွယ်မှုမရှိပါ။ လိင်တူချင်းလက်ထပ်သူကိုမမျှော်လင့်ဘဲရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပျော်ရွှင်သောအိမ်ထောင်ကိုကွာရှင်းမှုအထိဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ပယ်ရီကပြောပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာ Perry နဲ့ Schleifer လည်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုရပ်စဲမိန်းမတို့အဘို့ကွာရှင်းတစ်လျှော့ချအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကနဦးစစ်တမ်းလှိုင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲလှိုင်းထဲမှာညစ်ညမ်းကြည့်ရှုသတင်းပေးပို့သူကိုအမျိုးသမီးများနေ့လှိုင်းတံပိုးအကြားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရပ်စဲသောမိန်းမတို့အဘို့ 18 ရာခိုင်နှုန်းကဖြစ်နိုင်ခြေနှိုင်းယှဉ်, ထိုနောက်ဆက်တွဲလှိုင်းများကကွာရှင်းခံရတစ်ခု6ရာခိုင်နှုန်းကဖြစ်နိုင်ခြေရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်လူတို့တွင်, ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုပျစဲသုတေသီယောက်ျားတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှ connection ကိုစောင့်ကြည့်ဘို့သေးငယ်တဲ့နမူနာအရွယ်အစားရရှိလာတဲ့, ၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုတသမတ်တည်းဖြစ်လေ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုအဘယ်သူမျှမကစာရင်းအင်းသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
လေ့လာမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအရသုတေသီများကသူတို့၏တွေ့ရှိချက်များအရစုံတွဲများသည်သူတို့၏အိမ်ထောင်ရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်အချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန်ကူညီနိုင်သည်ဟုဆိုသော်လည်းမူဝါဒဆိုင်ရာပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်မသင့်လျော်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ လိင်တူချင်းလက်ထပ်ခြင်းကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအကြောင်းရင်းများကိုတားမြစ်ထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအစီအစဉ်ကိုတွန်းအားပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အလိုဆန္ဒမရှိပါ။ “ ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်မှကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာအရဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုမလုပ်ပါဘူး။ သတင်းအချက်အလက်ကအထောက်အကူပြုတယ်၊ အမေရိကန်တွေကအခြေအနေအချို့မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုသတိထားသင့်တယ်။